MBOLA RAJAONAH : Voasambotra omaly teny Antsahabe
Voasambotry ny mpitandro filaminana, omaly, tetsy Antsahabe ihany koa i Mbola Rajaonah. 13 février 2019
Raha tsiahivina fohy dia efa ela ity mpandraharaha ity no nanana raharaha teny amin’ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly na Bianco. Namoahan’ny ministeran’ny atitany IST na didy tsy fahafahana mivoaka an’i Mada gasikara i Mbola Rajaonah teo aloha noho ny raharaha kolikoly avo lenta izay nahavoa saringotra azy. Noravain’ny filan-kevi-panjakana anefa io didy tsy fahafahana mivoaka an’i Madagasikara io taty aoriana ka nihevi-tena ho nalalaka tanteraka amin’izay tiany hatao ity farany.
Nanohy ny nataony indray izy taorian’izay ary raha iverenena kely ny tantara dia izy ity no isan’ireo atidoha nikotrika ny fanakorotanana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey taorian’ireny fifidianana Filoham-pirenena natao teto amintsika ireny rehefa tsy nahomby sy naloan’ny vahoaka indray Ingahy Ravalomanana Marc, ekipa notohanany.
Voasokajy ho isan’ireo nanohintohina ny filaminana anatiny izy sy ry Rolly Mercia, Fanirisoa Ernaivo, Fidele Razarapiera sy ireo namany hafa taorian’izay. Ho fisorohana ny fitsoahany any ivelany mahakasika ireo raharaha miandry azy ireo dia nilatsaka ho azy sy ireto ekipany ireto indray ny didy tsy fahafahana mivoaka an’i Madagasikara. Voalohany ho an’iretsy namany voatanisa etsy ambony iretsy ity Ist ity fa efa fanindroany kosa ho an’Ingahy Mbola Rajaonah satria efa nisy ilay didy nolazaintsika tetsy ambony, noravan’ny filan-kevi-panjakana.
Tsy mahagaga araka izany raha voasambotra ity mpandraharaha ikoizana amin’ny resaka kolikoly ity. Izy no tompon’ny Orinasa “Transit Tafaray” izay mampiditra sy mamoaka ny entana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ary mbola azy koa ny “Vondrona RLM Communication” izay diso fantatry ny rehetra loatra amin’ny fanelezana tsaho sy vaovao tsy marina hanadiovana ny raharaha ratsy ataon’ity lehilahy ity. Efa notanterina teto fa raha ireo lalana nodiavin’ity mpandraharaha ity nanomboka tamin’ny taona 2013 nakaty io no arahina sy zohiana dia tsy azo lavina fa nanao afera maloto ingahy Mbola Rajaonah na inona na inona fanadiovan-tena hataony. Porofon’izany ny fananany fiara tsy mataho-dalana maro amin’ireo kalitao tena raitra no sady lafo vidy ary miovaova hatrany.
Hosoka bevava maro no efa nataony tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina tamin’ny fampidirana ireo entana lafo vidy nafarany ireo saingy noho ny fahaizany sy noho ny fampanjakany ny kolikoly dia saika tsy nandoavan-ketra avokoa ireny entana nampidiriny ireny raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ilay fiara tsy mataho-dalana Toyota Land Cruser V8 tratra tamin’ny taon-dasa teo. Nolazaina tamin’izany fa “panneaux solaires” tamin’ny baoritra nifona ny entana saingy rehefa nandalo fisavana dia tra-tehaka ny tao anatiny ka voatery naverina tany Toamasina, araka ny loharanom-baovao marim-pototra.
Raha araka ny loharanom-baovao voaray dia nentina etsy amin’ny sampan-draharaha miady amin’ny heloka bevava etsy Anosy izy ary andrasana ny tohin’ny fanadihadiana.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (165) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (94) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (91) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (83) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (80) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (72) 22 mai 2020